Kedu ihe bụ ike ikuku, ikuku na ikuku na ọdịnihu | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Kedu ihe bụ ike ikuku, usoro ikuku na ọdịnihu
Daniel Palomino | | Ike ikuku
N'ezie ị maara ihe ike ikuku dị n'ozuzu ya, mana You maara ihe niile gbasara ike a?
N'uzo zuru oke anyi na-ekwu na ike ikuku di ike ikpo ọkụ sitere n'ime ụwa.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ike dị na mbara igwe bụ naanị ike ọkụ na - emegharị emegharị nke anaghị esite na Sun.
Na mgbakwunye, anyị nwere ike ikwu na ike a abụghị ume ọhụrụ dị ka ndị a, ebe ọ bụ na mmeghari ohuru ya enweghi njedebe, Otú ọ dị enweghị ngwụcha na oke mmadụ, ya mere a na-ewere ya ka ọ dị ọhụrụ maka ebumnuche ndị bara uru.
1 Mmalite nke okpomoku di n’ime uwa
2 Ojiji nke ike geothermal
2.1 Mmiri dị elu dị elu
2.2 Okpomoku di ala
2.3 Akọrọ nkume mmiri na-ekpo ọkụ
3 Ike ikuku ọkụ dị oke ala
3.1 Igwe mgbapụta ọkụ
3.2 Gbanwee sekit na ụwa
3.2.1 Mgbanwe ọkụ na mmiri dị n'elu
3.2.2 Gbanwee ya na ala
3.3 Gbanwee sekit na ụlọ
4 Arụ ọrụ nke usoro ikuku ikuku
5 Nkesa ike nke geothermal
6 Uru na ọghọm nke ike ikuku
7 Ọdịnihu nke ike ikuku
Mmalite nke okpomoku di n’ime uwa
Isi ihe na-akpata okpomọkụ n’ime iswa bụ na-aga n'ihu ire ere nke ụfọdụ redioaktivu ọcha dị ka Uranium 238, Thorium 232 na Potassium 40.
Ọzọ nke mmalite nke ike ikuku bụ nkwekọrịta nke efere tectonic.
Otú ọ dị, na mpaghara ụfọdụ, a na-etinyekarị okpomoku dị ka ogbe dị ugwu mgbawa, mmiri magma, geysers na mmiri ọkụ.
Ejila ike a mee ihe dịkarịa ala afọ 2.000.
Ndị Rom na-eji mmiri ọkụ n’ọkụ ụlọ mposi na, na nso nso a, a ike e ji mee ihe maka ikpo ọkụ nke ụlọ na griin haus na maka ọgbọ eletrik.
Ugbu a enwere ụdị nkwụnye ego 3 nke anyị nwere ike ịnweta ike ikuku:
Mmiri dị elu dị elu
Okpomoku di ala
Akọrọ nkume mmiri na-ekpo ọkụ
Anyị na-ekwu na e nwere nkwụnye ego nke elu okpomọkụ mgbe mmiri ọdọ mmiri ruru okpomọkụ n'elu 100ºC n'ihi ọnụnọ nke isi iyi ọkụ na-arụ ọrụ.
Iji mee ka ikuku na-ekpo ọkụ mepụta ike ikuku mmiri ga-arụ ọrụ, ọnọdụ ala ga-eme ka o kwe omume ịmalite a ikuku mmiri geothermal, nke yiri nke ndị dị na mmanụ ma ọ bụ gas, nke nwere a permeable nkume, sandstones ma ọ bụ nzu dị ka ihe atụ, nke a akwa mmiri, dị ka ụrọ.
Mmiri dị n'okpuru ala nke a na-eme ka okwute na-agafe n'akụkụ elu n'ọdọ mmiri, ebe ha ka tọrọ atọ n'okpuru oyi akwa a na-apụghị imeri emeri.
Mgbe enwere mgbape na kwuru oyi akwa a na-apụghị imeri emeri, mgbapụ nke uzuoku ma ọ bụ mmiri n'elu ala ga-ekwe omume, na-apụta n'ụdị isi iyi na-ekpo ọkụ ma ọ bụ geysers.
Ejirila mmiri a na-ekpo ọkụ kemgbe oge ochie ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ọkụ na usoro mmepụta ihe.
Baths Roman nke Bath
Ọdọ mmiri na-enweghị okpomọkụ bụ nke dị n’ime ya mmiri okpomọkụ, nke anyị na-aga iji, dị n’agbata 60 na 100ºC.
N'ime ego ndị a, uru nke ọkụ ọkụ bụ ihe nkịtị nke ụwa, ya mere ịdị adị nke 2 nke ọnọdụ ndị gara aga adịghị mkpa: ịdị adị nke isi iyi na-arụ ọrụ na mkpuchi nke ụlọ ahịa mmiri.
Naanị ọnụnọ nke ụlọ nkwakọba ihe na o kwesịrị ịdị omimi nke mere na, ya na gradient dị ugbu a na mpaghara ahụ kwuru, enwere ọnọdụ okpomọkụ na-eme ka nrigbu ya nweta akụ na ụba.
Ikike nke ike ikuku es otutu ukwuu ma ọ bụrụ na a na-amịpụta okpomọkụ sitere na nkume ndị na - ekpo ọkụ, nke na-enweghị mmiri dị ka okike.
Ha nọ na a ọnọdụ okpomọkụ dị n’agbata 250 na 300ºC ugbua otu omimi n'etiti mita 2.000 na 3.000.
Maka nrigbu ya dị mkpa iji gbajie okwute na-ekpo ọkụ nkume, ka mee ka ha daa.
Mgbe ah a na-ewebata mmiri oyi site n'elu site na ọkpọkọ, na-ahapụ ya ka ọ gafere site na nkume gbawara agbawa agbawara, nke mere na ọ na-ekpo ọkụ na mgbe ahụ, a na-amịpụta alụlụ mmiri site na ọkpọkọ ọzọ iji nrụgide ya na-ebugharị turbine na igbanye ike eletrik.
Nsogbu nke ụdị nrigbu a bụ usoro maka ịkụji nkume na omimi dị otú ahụ na ịkụ ala.
Ọ bụ ezie na e nweela ọganihu dị ukwuu na mpaghara ndị a site na iji usoro olulu mmanụ.
Ike ikuku ọkụ dị oke ala
Anyị nwere ike ịtụle ihe subsoil nta miri emi dị ka a ọkụ ọkụ na 15ºC, na-eme ka ọ dị ọhụrụ na nke anaghị agwụ agwụ.
Site na usoro nchịkọta dị mma na mgbapụta ọkụ, enwere ike ibufe ọkụ site na isi iyi a na 15ºC na usoro nke ruru 50 thatC, na nke ikpeazụ nwere ike iji kpo oku ma nweta mmiri ọkụ dị ọcha maka iji n'ụlọ.
Ọzọkwa, otu ihe mgbapụta ọkụ ahụ nwere ike ịmị ọkụ site na gburugburu ebe obibi na 40ºC ma nyefee ya ala mmiri na otu usoro ijide yaYa mere, sistemụ nke nwere ike idozi kpo oku ụlọ nwekwara ike idozi obi jụrụ, ya bụ, ụlọ nwere otu nrụnye maka ikuku ikuku ya.
Ndaghachi azụ nke ụdị ike a bụ choro uzo ili ozu nke di uku na okirikiriOtú ọ dị, isi uru ya bụ pOhere nke iji ya dị ka usoro kpo oku na usoro jụrụ oyi dị oke ọnụ.
Na eserese na-esote ị nwere ike ịhụ ụzọ dị iche iche nke ijide ma ọ bụ nyefee okpomọkụ na ala maka iji mee ihe na kpo oku, jụrụ ma nweta DHW (mmiri ọkụ ụlọ). M ga-akọwa usoro dị n'okpuru.
Ntụ oyi nke ulo, otutu ulo, ulo ogwu, wdg. enwere ike iru n'otu n'otu,, ebe ọ na-achọghị nnukwu ego maka usoro ahụ, n'adịghị ka ụlọ ọrụ geothermal dị elu na nke dị ala.
Usoro a maka ijiri ike nke anyanwụ nke ụwa na-etinye na-adabere na isi ihe atọ:
Igwe mgbapụta ọkụ
Gbanwee okirikiri ya na ụwa
Mgbanwe ọkụ na mmiri dị n'elu
Gbanwee ya na ala
Gbanwee sekit na ụlọ
Igwe ọkụ ọkụ bụ igwe thermodynamic nke dabere na Carnot Cycle nke gas rụrụ.
Igwe a na - amịpụta okpomọkụ site n’otu isi iji nyefee ya na nke ọzọ dị na okpomoku dị elu.
Exampledị ihe atụ kachasị mma bụ frijiNdị a nwere igwe nke na-ewepụta okpomọkụ site n'ime ma na-achụpụ ya n'èzí, nke dị na okpomọkụ ka elu.
Ihe atụ ndị ọzọ nke nfuli ọkụ bụ ikuku ikuku na ikuku ikuku maka ụlọ na ụgbọala.
Na atụmatụ a, ị ga-ahụ na Oyi bọlbụ na-amịkọrọ okpomọkụ sitere na ala na mgbanwe yana mmiri mmiri nke na-ekesasị na bọlbụ ọkụ ahụ na-ekpo ọkụ ruo mgbe ọpụpụ.
Sekit ahụ na-eburu mmiri na-ekpo ọkụ si n’ala na-ajụ oyi ma laghachi n’ala, ala okpomọkụ mgbake dị nnọọ ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, bọlbụ na-ekpo ọkụ, n'ime ụlọ, na-ekpo ọkụ ikuku na-enye ya okpomọkụ.
Igwe mgbapụta na-ekpo ọkụ "na-agbapụta" ọkụ site na bọlbụ oyi na bọlbụ ọkụ.
Irụ ọrụ (ike ọkọnọ / ike etinye obi gị dum) ọ na-adabere na okpomọkụ nke isi iyi na-eweta okpomọkụ evaporated.
Usoro ikuku ikuku nara okpomọkụ site na ikuku, nke nwere ike iru n'oge oyi okpomọkụs n'okpuru -2 Celsius C.
A okpomọkụ na evaporator ike weghara fọrọ mba okpomọkụ na mgbapụta arụmọrụ dị obere.
N'oge ọkọchị mgbe ọ dị ọkụ karị, mgbapụta ahụ ga-ahapụ ikpo ọkụ site na ikuku nke nwere ike ịbụ 40 Celsius C, na ihe ịrụ ọrụ adịghị mma dịka ị tụrụ anya ya.
Otú ọ dị, usoro ikuku mmiri nke geothermal, site n'inwe isi iyi nye mgbe niile okpomọkụ, arụmọrụ bụ mgbe ezigbo n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe nke ikuku. Ya mere usoro ihe a ji arụ ọrụ nke ọma karịa mgbapụta ọkụ ọkụ.
Gbanwee sekit na ụwa
Usoro a dabere na tinye mmiri na kọntaktị ọkụ na-abịa site na mmiri site na evaporator / condenser, dị ka mkpa si dị, maka absorption ma ọ bụ nyefe nke okpomọkụ na mmiri kwuru.
Uru: onyinye bụ na ọ nwere a ọnụ ala
Drawback: ọ bụghị mgbe niile ka isi iyi mmiri dị.
Este nwere ike iduzi mgbe a gbanwere mgbanwe n'etiti ala na evaporator / condenser nke mgbapụta ọkụ site na ọkpọkọ ọla kọpa.
Maka ụlọ, enwere ike ịchọ ọkpọkọ n'etiti mita 100 na 150.
Uru: ọnụ ala, ịdị mfe na ịrụ ọrụ nke ọma.
Drawbacks: ohere nke ikuku gas na mmiri oyi nke mpaghara nke ala ahụ.
Ma ọ bụ nwere ike ịbụ ihe inyeaka sekit mgbe o nwere set nke pipụ eli, site na nke a na-ekesa mmiri, nke na-agbanwe okpomọkụ na evaporator / condenser.
Maka ụlọ, enwere ike ịchọ ọkpọkọ n'etiti mita 100 na 200.
Uru: nsogbu dị ala na sekit, si otú a na-ezere nnukwu ọdịiche nke okpomọkụ
Drawbacks: ụgwọ dị elu.
Ndị a na sekit na sekit nwere ike ịnọnyere mgbanwe ma ọ bụ ikesa mmiri ọkụ na mmiri oyi.
Direct mgbanwe Ọ dabere na ịgbagharị mmiri ikuku n'elu evaporator / condenser n'akụkụ ụlọ ahụ maka mgbanwe okpomọkụ ma kesaa ikuku a na-ekpo ọkụ / oyi n'ụlọ niile, site na ọkpọkọ a na-ekpo ọkụ.
Site na otu usoro nkesa, a na-edozi nkesa nke ọkụ na oyi na ụlọ.
Uru: ha na-enwekarị ọnụ ala na ọtụtụ ihe dị mfe.
Drawbacks: arụmọrụ dị ala, nkasi obi dị oke mma ma ọ bụ naanị maka ụlọ ndị e wuru ọhụrụ ma ọ bụ nwee usoro ikuku kpo oku ikuku.
Usoro nkesa mmiri ọkụ na oyi Ọ na-adabere na ịgagharị mmiri nke mmiri n'elu evaporator / condenser n'akụkụ ụlọ maka mgbanwe okpomọkụ.
A na-ajụkarị mmiri ahụ na 10ºC n'oge ọkọchị ma kpoo ya 45ºC n'oge oyi ka eji ya dị ka ihe ikuku ikuku.
Underfloor kpo oku bụ usoro kachasị mma ma kachasị mma iji dozie kpo oku, Otú ọ dị, enweghị ike iji ya mee ka obi jụrụ, yabụ ọ bụrụ na ejiri usoro a ma ọ bụ nke radiators mmiri ọkụ, a ga-arụnye usoro ọzọ iji nwee ike iji obi jụrụ.
Uru: nnukwu nkasi obi na arụmọrụ.
Arụ ọrụ nke usoro ikuku ikuku
Ike ọkụ nke usoro ikuku ikuku na-eji dika ihe oku subsoil na 15ºC bụkarịa nke 400% na kpo oku na 500% na obi jụrụ.
Mgbe ọ na-ekpo ọkụ Enwere naanị onyinye nke ike eletrik nke 25% nke ike achọrọ. Ma mgbe ejiri ya mee ka arụmọrụ ya dị jụụ karịa okpukpu abụọ nke ọkụ ọkụ na-agbanwe ikuku na ogo 40, yabụ na nke a enwerekwa nchekwa ego nke ihe karịrị 50% ma e jiri ya tụnyere igwe ikuku.
Nke a pụtara na iji kpoo site na ntu oyi na osisi ọkụ ọkụ 4 nkeji nke ike (dịka ọmụmaatụ calorie 4), naanị otu ike 1 dị mkpa.
Na ngwa nju oyi, maka ihe ọ bụla 5 pumped, a chọrọ 1 unit iji bulie ha.
Nke a ga-ekwe omume ebe ọ bụ na anaghị ewepụta okpomọkụ niile, mana a na-ebufe ọtụtụ n'ime ya site na otu isi na nke ọzọ.
Mkpụrụ ume nke anyị na-enye na mgbapụta ọkụ dị n'ụdị ike eletriki, yabụ na anyị na-ewepụta CO2 na ọkụ eletrik na-emepụta osisi, ọ bụ ezie na ọ dị obere.
Kaosinadị, anyị nwere ike iji nfuli ọkụ ndị ọzọ karịa eletrik, ma na isi iyi nke ike ha bu okpomoku oku ma ha ka no n'ime ihe omuma.
Si anyị na-atụnyere sistemu a na sistemụ ọkụ ọkụ anwansi site na ogwe anyi nwere ike ihu ya na-eweta nnukwu uru, ebe ọ bụ anaghị achọ nnukwu ndị nkwakọba ihe iji kwụọ ụgwọ maka awa nke enweghị ụzarị anyanwụ.
Nnukwu ngwakọta bụ oke nke ụwa nke ahụ na-eme ka anyị nwee ike isi ike na okpomọkụ mgbe niile, nke metụtara ngwa a na-akpa agwa dịka enweghị nsọtụ.
Otú ọ dị, onye na-eme ya Nhọrọ kachasị mma maka iji ike a bụ ijikọta ya na ike ọkụ nke anyanwụ., ghara imegharị ihe mgbapụta ọkụ dị ka ekwuru n'elu (nke nwekwara) ma ịgbakwunye okpomọkụ na usoro, nyere na na kpo oku na ụlọ mmepụta mmiri ọkụ, enwere ike iweta mmiri na 15ºC site na iji ike geothermal n'ihi na mgbe e mesịrị, bulie ogo nke mmiri na ike anyanwụ.
Na nke a arụmọrụ nke mgbapụta ọkụ na-abawanye ụba.
Nkesa ike nke geothermal
Ike okpuru a gbasaa n’uwa niile, karịsịa n'ụdị akọrọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ma enwere mpaghara nke ọ gbatịrị ikekwe ihe karịrị 10% nke mbara ụwa ha nwekwara ọnọdụ pụrụ iche iji zụlite ụdị ike a.
M na-ekwu na Mpaghara n'ime nke na-egosiputa mmetụta nke ala ọma jijiji na ugwu mgbawa na nke ahụ, n'ozuzu, dabara na mmebi tectonic dị mkpa
Themfọdụ n’ime ha bụ:
Oke osimiri Pacific nke kọntinent America, site na Alaska ruo Chile.
Ebe ọdịda anyanwụ Pacific, site na New Zealand, site na Philippines na Indonesia, na ndịda China na Japan.
Ndagwurugwu nke iwepu Kenya, Uganda, Zaire na Etiopia.
Ike a, dị ka ihe niile dị, nwere akụkụ ya dị mma yana akụkụ ya dị njọ.
Como uru anyị nwere ike ịsị na:
A chọtala ya ekesa n'uwa nile.
Ebe kachasị akụrụngwa geothermal dị na ebe mgbawa ugwu dị maka ọtụtụ akụkụ na mba ndị na-emepe emepe, nke nwere ike ịbụ ezigbo bara uru iji meziwanye ọnọdụ gị.
Ọ bụ enweghị ike isi nweta ya na onodu mmadu.
Bụ ike dị ọnụ ala karịa a maara nke ahụ.
Gị adịghị ike na ntụpọ ha bụ:
Ojiji nke ike geothermal na-enye ụfọdụ nsogbu gburugburu ebe obibi, akpan akpan, na ntọhapụ nke gas sulphurous n'ime ikuku, tinyere mmiri ọkụ na-agbapụta n'osimiri, nke na-enwekarị nnukwu ihe siri ike.
Ọ bụ ezie na n'ozuzu ya, enwere ike ịbughachi mmiri mkpofu n'ime ụwa, mgbe amịpụtachara ya, n'ọnọdụ ụfọdụ, nwere ike iji potassium nnu.
N'ozuzu, nnyefe nke ikuku geothermal n'ogologo oge anaghị ekwe omume. Ekwesịrị iji mmiri ọkụ ma ọ bụ uzuoku mee ihe na mpaghara ebe ọ si, tupu ọ jụọ oyi.
A na-ahụ ọtụtụ mmiri dị na mbara igwe okpomọkụ n'okpuru 150ºC ya mere n'ozuzu, ọ naghị ekpo ọkụ ọkụ maka ọkụ eletrik.
Enwere ike iji mmiri a maka ịsa ahụ, ụlọ kpo oku na griin haus na kụrụ n'èzí, ma ọ bụ dị ka mmiri ọkụ maka ọkụ ọkụ.
na Osimiri okwute na-ekpo ọkụ na-adị mkpụmkpụDị ka ebe gbawara agbawa ajụkwa ọsọ ọsọ, ike ha arụmọrụ na-ada ngwa ngwa.
na ụgwọ echichi dị oke elu.
Ruo ugbu a, ọ bụ naanị perforations na wepụ okpomọkụ na omimi nke ihe dịka 3 km, n'agbanyeghị na a na-atụ anya na ọ ga-enwe ike iru omimi ka ukwuu, nke enwere ike iji ike geothermal mee ọtụtụ ebe.
Ngụkọta ume dịn'ụzọ mmiri ọkụ, uzuoku ma ọ bụ okwute na-ekpo ọkụ, ruo omimi nke 10 km, abịakwute 3.1017 mkpịsị ụkwụ. Ugboro iri ugboro ugboro 30 oriri ụwa ugbu a. Nke na-egosi na ike ikuku mmiri nwere ike ịbụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na obere oge.
Usoro ndị emezuru maka mmepe nke ihe ndị dị na mbara igwe dị ka ndị ejiri ya na mpaghara mmanụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ike mmiri dị na 300ºC dị puku ugboro karịa nke mmanụ, isi obodo nwere ike itinye ego na nyocha na igwu ala dị obere.
Otú ọ dị, ụkọ mmanụ nwere ike ime ka ojiji a na-amụbawanye n'ike n'ike nke ikuku ụwa.
N'aka nke ọzọ, ọ nọwo na-ekwe omume mgbe nile ojiji nke uzo geothermal maka ogbara nke oku eletrik na ndi n’etu turbo-generator (10-100MW) nke di nso na ebe ndi ozo di nma, ma nke kachasi ike ikpo oku ikuku mmiri bu 150ºC.
N'oge na-adịghị anya E mepụtara turbines na-enweghị agụ maka mmiri na-ekpo ọkụ na uzuoku ruo 100ºC naanị, nke na-enye ohere ịgbasawanye ubi eji eji ike a.
Ọzọkwa, enwere ike iji ya rụọ ọrụ ụlọ ọrụ dị ka nhazi nke ọla, na kpo oku nke ulo oru ulo oru nile di iche iche, na kpo oku nke griin haus, wdg
Ma eleghị anya ọdịnihu kasịnụ nke ike ikuku ụwa dị na itinye ume ikuku dị oke ala, n'ihi ọdịdị ya, ịdị mfe, obere akụ na ụba na gburugburu ebe obibi na ohere nke jiri ya dika sistemu kpo oku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Kedu ihe bụ ike ikuku, usoro ikuku na ọdịnihu
Ìhè nke Galicia, ọkara nke emere maka mmeghari ohuru na kol
Batrị Tesla Powerwall 2